Sirdoon Network » Baaq Beesha Xawaadle oo ku wajahan Siyaasada Soomaaliya iyo waxa muqdisho ka dhacaya
11:00 14:00 18:00 Baaq Beesha Xawaadle oo ku wajahan Siyaasada Soomaaliya iyo waxa muqdisho ka dhacaya
Apr 02, 2007 Dhamaan Warfaafinta Somalia Asalaamu Calaykum.
Walaalayaal waxaan halkaan idiinku soo diraynaa Baaq ka soo baxay Wax garadka, Aqoonyahanka Ganacsatada Beesha Xawaadle, Dood dheer iyo wada hadal dheer ka dib, waxaan idinka rajeynayaa inaad faafisaan. Press Release Beesha Xawaadle 01-04-200
v Kadib Xiriir Balaaran oo ay yeelatay Beesha Xawaadle gudaha dalka iyo dibadiisaba, kaasoo dhex maray Odayaasheeda, Waxgaradka, Ganacsata, iyo Aqoonyahanka Beesha.
v Ka dib markii ay arkeen nabadii Soomaaliya oo faraha ka sii baxaysa, Dalkiina uu sii galayo Mugdi siyaasadeed ooh hor leh, iyo dagaalo sokeeye oo lagu hoobto.
v Markii Beeshu u kuur gashay Dagaalada Arxan darada ah ee ka dhacay magaalo madaxdii Soomaaliya oo ay beeshu si xoogan u dagto marka laga yimaad Gobolka Hiiraan, Shabelada Dhexe, Shabelada Hoose, Jubooyinka iyo Gedo. v Iyadoo ay jirtay in Beeshu aad u taageertay mirihii ka soo baxay shirkii Mbgathi 2004 si loo helo nabad guud waloow aysan ku qanacsanayn qeybta ay ka heshay baarlamaanka iyo Golaha wasiiradaba. v Markii Beesha u kuur gashay in taageerida ay u haysay Madaxweyne C/laahi yuusuf ay keentay quursi iyo tixgelin la'aan, isagoon isku howlin inuu la kulmo Odayaasha Dhaqanka, Aqoonyahanka iyo Ganacsatada ku sugan Muqdisho siduu ula kulmayay Beelaha ku sugan Muqdisho. v Markii Beeshu aad uga niyad jabtay magacaabista maamulo isdaba joog ah oo loo sameeyay gobolka iyo degmooyinka qaar iyadoon lagala tashan madax dhaqameedka beesha, Ganacsatada, iyo Aqoonyahankaba, lana casilayo iyadoon lagala tashan taasoo sharaf dhac iyo jibin Axdi qarameedka ah. v Markii loo kuur galay habdhaqameedka Maamulka la soo magacaabay ee soo rogoy canshuur aan lagala tashan dadka degaanka, ay sababtay in si bareer ah loo dilo Dad rayid ah oo sababi kartana iska hor imaad beesha dhexdeeda ah taas oon horay u dhicin (Degamada Jalalaqsi). v Markii Beeshu si gaara u garwaaqsatay in Xukuumadu ay ka shaqeynayso in ay iska horimaad ka dhexdeco iyo naceyb Beesha iyo Beelaha kale ee la degan gobolka. v Markii ay Beeshu aad uga naxday in Gobolka Hiiraan xukunkiisii loo wareejiyay Degmada Feerfeer ee Kilinka 5aad, oo mar walbaba looga yeerayo. Beesha Xawaadle waxay Go'aansatay Qodobadan Soo socda 1- In Xukuumada C/laahi Yuusuf ay joojiso dagaalada xasuuqo iyo xaqdarada ah ee ay ka wado magaalada muqdisho oo ay ku baaba'ayaan Maatada degan magaalada. 2- Beeshu waxay Xukuumada Itoobiya ugu baaqaysaa iney joojiso weerarada gardarada ah ee ay ku hayso magaalada muqdisho, oo aysan siyaasada soomaaliya Qolo la safan, cadeysana waqtiga iyo goorta dalka ay isaga baxayaan, ayna ceyb ku tahay dowlad weyn sida itoobiya in ay noqoto Jufo ka mida Jufooyinka soomaaliya oo ku dagaalamaysa wadooyinka Muqdisho. 3- Beesha Xawaadle meel walbo ay joogto in ay si buuxdo u taageerto Midnimada Hawiye, ayna Dowr firfircoon ku yeelato dhowrista iyo difaacida xuquuqda siyaasadeed ee Hawiye. 4- Hadii Dagaalada Sii socdaan in beeshu Awoodeeda Dhaqaale iyo Cududeeda Meliteri ay ku biiriso Guurtida Hawiye ee Dhaqdhaqaaqa Siyaasadeed iyo Difaaceed ka wada Muqdisho. Gobolkana loo ogolaan in Maleeshiyaadka ka imaanaya Gobolada kale aysan soo dul marin. 5- Beeshu waxay si cad ugu sheegaysaa Ciidamada Itoobiya in Maritaanka Ciidamadooda ee Gobolku ay Dhibaato ku imaan karto hadii Xasuuqa Maatida Hawiye lagu hayo sii socoto. 6- Waxaan ugu Baaqaynaa dhamaan Ugaasyada Iyo Nabadoonada Beesha Hawiye in ay Shir isugu yimaadaan si mawqif cad oo mideysan Beeshu u yeelato, Ugaas C/raxmaan Ugaas Khaliifna waxaan ugu baaqaynaa inuu dadaalkaas Hormuud ka noqdo. gundhigna ay u noqdaan, sidii laysugu soo celin lahaa Hawiye, layskuguna soo dhaweynlahaa Dhamaan Qabaa'ilka soomaaliyeed 7- Waxaan ugu Baaqaynaa Dhamaan Aqoonyahanka Hawiye in ay soo diyaariyaan Qorsho Siyaasadeed oo Beeshu Gudaheeda si sax ah ugu heshiin lahayd, ulana heshiin lahayd Beelaha kale ee walaalaha nahay sida Dir , Daarood, Raxanweyn, iyo Soomaali weynta kale. 8- Xiriirka Beesha iyo Bulshada Caalamka waxaa gaaray Dhawac weyn laga soo bilaabo 1993-dii Siyaasiyiinta iyo Aqoonyahanka Beesha, Warfaafinta waxaan ugu baaqaynaa in ay soo bandhigaan Qorsho loola heshiin karo Bulshada Caalamka gaar ahaan Maraykanka, iyo Itoobiya. 9- In Gobolka Hiiraan laga Sameeyo Maamul Cusub oo ku dhisan rabitaanka dadka deegaanka dhamaantood, laguna dhiso maamulkaas shir ay ka soo qeyb galaan dhamaan qabaa'ilka dega.
10- Dhamaan in Siyaasiyiinta Beesha Hawiye ee ku jira Xukuumada in loogu baaqo in ka baxaan Xukuumada bacdamaa ay ku fashilantay qorshihii loo soo unkay oo ahayd in ay ilaaliso rabitaanka shacabka kana shaqeyso Nabada. 11- Beeshu Waxay go'aan ku gaartay sida ugu dhaqsida badan in ay u doorato Gudi siyaasadeed iyo Afhayeen u Hadla Beesha kana Tarjuma Dareenkeeda Siyaasadeed ee Beesha xiligaan.